ထိုင်းတွင်အလုပ်မရဘဲ မြဝတီတွင် ရက် ၅ဝ ခန့်ကြာ သောင်တင်နေသူများ နေရပ်ပြန်နိုင်ရန် ကြိုဆိုရေ?? - Yangon Media Group
ရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာ ၆- ထိုင်းတွင် အလုပ်မရဘဲ မြဝတီ၌ ရက်ပေါင်း ၅ဝ ခန့်ကြာ သောင်တင်နေသော မြန်မာရှစ်ဦးက နေရပ်သို့ပြန်ရန် ကြို ဆိုရေးစခန်းသို့ လာရောက်အကူအ ညီတောင်းခံခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
၄င်းတို့သည် စက်တင်ဘာ ၂ဝ ရက်တွင် ပွဲစား၏ ခေါ်ဆောင်လာ မှုကြောင့် မြဝတီသို့ ရောက်ရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ယခု ၄၇ ရက်ကြာသည့်တိုင် ထိုင်းတွင်အလုပ်မရဘဲ မြဝတီ၌ သောင်တင်နေခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါ အလုပ်သမား ရှစ်ဦး သည် နိုဝင်ဘာ ၆ ရက်တွင် မြဝတီ မြို့ရှိ အလုပ်သမား ကြိုဆိုရေးစခန်း သို့ လာရောက် အကူအညီတောင်းခံ ခဲ့ကြပြီး ကြိုဆိုရေးစခန်းမှလည်း ၄င်း တို့ နေရပ်ပြန်နိုင်ရေး စီစဉ်ပေးမည် ဟုဆိုကြောင်း လိမ်လည်ခံရသည့် အလုပ်သမားများထံမှ သိရသည်။
”ကျွန်တော်တို့ကို ခေါ်လာတုန်း က မြဝတီကိုရောက်တာနဲ့ နောက် နေ့ ထိုင်းကိုသွားရမယ်လို့ ပြောတယ်။ အခု ကျွန်တော်တို့ မြဝတီကို ရောက် တာ ၄၇ ရက်ကြာသွားပါပြီ။ ယနေ့ ထိ ထိုင်းကို မသွားရသေးဘူး”ဟု မကွေးတိုင်းဒေသကြီး မင်းတုန်းမြို့ နယ်မှ ကိုနန်းအောင်က ဆိုသည်။
၄င်းတို့သည် ရန်ကုန်မြို့နေ ပွဲ စား ဦးသိန်းအောင် အမည်ရှိသူထံ တစ်ဦးလျှင် ကျပ်ခုနစ်သိန်းခွဲစီ ဝန် ဆောင်ခပေးခဲ့ရကြောင်း၊ ¤င်းတို့ နေထိုင်ရန် မြဝတီမြို့ အမှတ်(၄) ရပ်ကွက်ရှိ ကျောက်လုံးကြီးလမ်းမှ အိမ်တစ်အိမ်ကို ငှားရမ်းပေးထား ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
၄င်းတို့ရှစ်ဦးသည် မင်းတုန်း၊ ကျုံပျော်နှင့် ဟင်္သာတမြို့နယ်တို့မှ ဖြစ်သည်။
၄င်းတို့ရှစ်ဦးသည် လိမ်လည် ခဲ့သည့် ပွဲစားများကို ဥပဒေကြောင်း အရ တရားစွဲဆိုသွားမည်ဟု သိရ သည်။
ပုဂံငလျင်ဒဏ်ခံဘုရားစေတီများ ထိန်းသိမ်းခြင်းကို လျာထားသည့်စေတီအရေ အတွက်ထက် ပိုမိုဆောင်ရွ??
'မြန်မာကင်းထောက်ဂီတပွဲတော်'ကို နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက်တွင် သုဝဏ္ဏ အမျိုးသားအားကစား ပြိုင်ပွဲရုံ(၁)၌ က?
တန်ဇန်နီးယားတွင် မိုးကြီး၍ လူ ၂၅ဝဝ ခန့် အိုးအိမ်များ ပျက်စီးခဲ့ရ
စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီး အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖိုရမ်မှ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ဆု??